Safari4လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ - Firebuggishly Great | Martech Zone
စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 24, 2013 Douglas Karr
နောက်ဆုံးပေါ်ကိုသာ install လုပ်လိုက်သည် Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း (OS X Leopard၊ ဗားရှင်း ၄) နှင့်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်သောကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ အထင်ရှားဆုံးဖြည့်စွက်ချက်မှာသင်အများဆုံးကြည့်ရှုသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ (hmmm …မှချေးထားသောအရာတစ်ခု) ၏မြင်ကွင်းကျယ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုဖြစ်သည် Firefox ကို?) ။
ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကပိုအရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါရပ်ကတော့၊ ဒြပ်စင်အင်္ဂါရပ်စစ်ဆေးပါ (hmmm ... ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှချေးယူ Firebug?)
Tags: Adobeအခြားရွေးချယ်စရာ software ကိုအခြားရွေးချယ်စရာdesktop ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများအလားတူလူမှုရေး bookmarksလူမှုမီဒီယာစစ်ဆေးတဲ့တက်ဘလက်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများ
WordPress အတွက် PostPost Plugin ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်